Xaalufinta dhirta ayaa gacan ka geysaneysa sii xumeynta kuleylka adduunka | Saadaasha Shabakadda
Xaalufinta dhirta waxay gacan ka geysaneysaa sii xumeynta kuleylka adduunka
Maaddaama tirada dadka ay sii kordheyso, ayaa sidoo kale baahida loo qabo: guryo badan ayaa loo baahan yahay, alaab badan, waraaqo badan, biyo badan, cunto badan, iyo waxyaabo kale oo badan. Si loo qanciyo, waxaa loo doortay sannado badan inay keymaha dhirta, mid ka mid ah sambabada Dunida maxaa yeelay waxay soo qaadaan kaarboon laba ogsaydhka oo waxay hawada u sii daayaan oksijiin, taas oo sidaan ognahay ay tahay gaaska aan u baahan nahay inaan ku neefsanno, sidaa darteedna, ku noolaano.
Xaalufinta dhirta waxay gacan ka geysaneysaa sii xumeynta kuleylka adduunka. Laakiin, sidee
Laba daraasadood oo lagu daabacay joornaalka sayniska ee Sayniska ayaa muujinaya taas jarista dhirta waxay kordhisaa heerkulka dusha in ka badan sidii hore loo malaynayay. Kii ugu horreeyay, oo ka socda Machadka Deegaanka iyo Joogtaynta Xarunta Cilmi-baarista Wadajirka ah ee Guddiga Yurub (JRC), wuxuu sharraxayaa sida xaalufku u saameeyo qulqulka tamarta iyo biyaha u dhexeeya dhulka iyo jawiga, sida horayba uga dhacday gobollada kulaylaha.
Arrinka tan labaad, oo uu diyaariyey cilmi-baare Kim Naudts oo ka socda sheybaarka cilmiga cimilada iyo deegaanka ee machadka Pierre Simon Laplace Institute (France) iyo kooxdiisaba, waxaa la muujiyey in kasta oo geedka dushiisa ee Yurub uu sii kordhayo, xaqiiqda ah in kaliya la hubo noocyada »waxay keenaysaa saameyn cascade ah oo aan faa'iido lahayn» Laga soo bilaabo 2010, 85% kaymaha yurub waxaa maamula bini'aadamka, laakiin bini'aadamka qaar ayaa leh doorbid kuwa leh qiime ganacsi oo weyn, sida geedaha beech. Kaymaha dhaadheer waxaa hoos u dhigay 436.000km2 ilaa 1850.
Isbedelada kuleylka maamul xumo geed darteed.
Ku beddelka kaymaha dhaadheer iyo kaymaha coniferous waxay keeneen isbeddelo ku saabsan evapotranspiration iyo albedo, taas oo ah, xaddiga tamarta qorraxda ee ka muuqata dibedda. Isbedelada qaar ee sii xumeynaya kuleylka adduunka. Sida laga soo xigtay qorayaasha, Qaab-dhismeedka cimilada waa inay tixgeliyaan maareynta ciidda, iyo sidoo kale dabooliddeeda, si saadaashu ay u sii saxnaato.
Dhir la'aan la'aan bani'aadamku fursad ma lahan, sidaas darteed Waxaa muhiim ah in tallaabooyinka lagama maarmaanka ah loo qaado si aysan ugu dhammaanin ku noolaanshaha meeraha lamadegaanka ku dhow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Xaalufinta dhirta waxay gacan ka geysaneysaa sii xumeynta kuleylka adduunka
Saamaynta isbeddelka cimilada ee Spain